#DEGDEG siihayaha Wasiirka waxbarashada dowladda FS Cabdullahi goodax Barre ayaa goordhow qarax weyn lagula beegsaday.. – Benaadirtv.com
#DEGDEG siihayaha Wasiirka waxbarashada dowladda FS Cabdullahi goodax Barre ayaa goordhow qarax weyn lagula beegsaday..
Beled-Xaawo (BTV) – Wararka naga soo gaarayo Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Sii haya Xilka Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cadbulaahi Goodax Barre uu ka badbaaday qarax lala eegtay.
Wasiir Goodax Barre iyo wafdi la socdo ayaa qaraxa oo ahaa nooca dhulka lagu aaso lagula eegtay inta u dhaxeyso Beled-Xaawo iyo Doolow gaar ahaan deegaanka Uunsi ee Gobolka Gedo.
Wararka ayaa sheegayo inuu wasiirka ka badbaaday isku daygaas lagu doonayey in lagu dilo, wuxuuna qaraxa haleelay mid kamid ah gawaaridii la socday. Wasiir Goodax Barre ayaa hadda si nad ah ku tagay Degmada Doolow.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegayo in qaraxaas ay ku dhaawacmeen laba Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu kala magacaabo Maxamuud Cali magan iyo Cabdicasiis Dhaga-qool.
Majirto wax war ah oo rasmi ah oo laga soo saaray wali inkasta oo dadka deegaanka ay soo wariyeen in wasiirku uu ka badbaaday wax dhaawac ah.
Dhaawacyadaa labadaan Xildhibaan ayaa lagu soo qaaday diyaarad, waxaana la filayaa in saacadaha soo socdo la keeno Magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin weerarkaas lagu qaaday kolonyada uu socday Wasiirka Waxbarashada sidoo kalana ma jirto weli koox sheegatay inkastoo weerarada noocaan oo kale ah looga bartay kooxda Al-Shabaab.
Wasiir Goodax Barre iyo Wafdi uu hoggaaminayo ayaa Maanta gaaray Gobolka Gedo, wuxuuna ujeekooda yahay inay dhagax dhigaan goobo waxbarasho oo ku yaalo deegaanada Gobolka Gedo oo qeyb-ka ah mashruuca hormarinta dugsiyada waxbarshada dalka.
Wixi war soo kordho, kala soco BenaadirTv.com
Previous Previous post: Wararkii ugu dambeeyey Kooxo hubeysan oo gudaha u galay Hotel Elite
Next Next post: Rasaas weli ka dhex socoto Hotel Elite iyo wararkii ugu dambeeyey